“Maalinta uu Tigree Addis Ababa soo galo Soomaaliduna waa geleysaa!” – MW Mustafe Cagjar | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka “Maalinta uu Tigree Addis Ababa soo galo Soomaaliduna waa geleysaa!” – MW...
“Maalinta uu Tigree Addis Ababa soo galo Soomaaliduna waa geleysaa!” – MW Mustafe Cagjar
(Hadalsame) 07 Nof 2021 – Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya ayaa ka digay in ciidammada deegaankiisu ay diyaar yihiin in fallaagada Tigray-ga ay ka difaacaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
‘Ciidan qoomiyadeed oo Addis Ababa soo gala, inaan la dagaalanno ayaa noo qorshaysan, waxaannuna aamminsannahay ciidan qaran oo aan ka Tigreega ka yarayn oo wax qabsan kara in aannu haysano” ayuu yidhi Madaxweyne Mustafe.
Aroorta Tigree baa Addis Ababa ku socda la yidhaa waxaad ogaataaan Soomaali addisababa ku socdana in aad maqlaysaan oo la gelayo, intay dawlad nagu noqdaan oo xerooyinka qabsadaan oo taangiyo soo qaataan diyaarado soo samaystaan oo iyaga oo dawlada nagu soo noqdana oo jigjiga ku dagaallanno marna in aanay dhacay, markaa haba yaraatee wax laga cabsadaa ma jiraan.” ayuu sii raaciyey hadalkiisa.
BBC-da ayaa waxaa u suurogashay inay wareysato Maxamuud Ugaas oo hadda ku sugan Washington, waxa uu sheegay in ujeedka loo asaasay ololihiisa uu yahay in “qofkasta uu helo xuquuqdiisa madaxbanaanida oo sidaa lagu wada joogo ama lagu kala tago.”
Previous articleTurkiga oo tijaabiyey gantaal u dhigma midka Ruushku sameeyo ee S-400 (Daawo)
Next article“Ma fahmayo micnaha waxa ay qoreen!” – Ergaygii ay cayrisey DF oo arrintaa ku gacan sayray!